The Legend pamusoro Shangri-La:Sumbu Pays ndiyo yakanaka UK slots online game developed by Net Entertainment. Chinhu 6 Gwenzi uye 5 misara slots rinowanikwa yagadzirwa pa-desktop, Mobile uye piritsi namano. This UK slots online game has a smooth gameplay under which the players have to create the groups of minimum 9 akafanana zviratidzo zvinoonekwa yakatambarara kana vertically pachinzvimbo payline-kuruboshwe-kurudyi. This Online cheap car insurance Site slots mutambo unogona kuridzwa ne shoma bheji pamusoro £ 0,10 uye kufadza bheji ye £ 200,00.
ichi UK Slots Online game has been themed upon mystical Himalayan kingdom as described by renowned author James Hilton. It ine fantastically yakagadzirwa ezvinhu ne naka Animations uye mifananidzo. This Online cheap car insurance Site kubvumira vatambi kuti awane hombe jackpot pamusoro 10,000 nguva danda ravo. The RTP iri 96.59%.
The slots rine 3 Guru mifananidzo zviri 2 nzvimbo yakakwirira- ari Tsoko, katsi uye nzou. Nepo dzimwe mifananidzo vanonzi yepepuru remukonikoni, ari Peach mavara ruva, ari Goldfish uye munyoro shavishavi. wo, girini mubvunzo chiito sezvo mhuka kuvake uye huchachinja kupinda yaanopinda chiratidzo achipa pamusoro payout kana zvasangana zvinogoneka.
Mari bhonasi Features kunotsvaka-
Izvi kusashanda nokusvika 3, 4, 5 kana 6 of uparadzire zviratidzo kumwe pamusoro Gwenzi. Izvi zvichaita kukwidza 2 vanodzungunyika nzvimbo saka, vatambi chete vanoda hafu chiratidzo mukati maonero kuitira kuti ichi vanoshingaira.
ikozvino, shanu, nhanhatu, vakasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso nomwe kana masere achapiwa kune vatambi azvaitwa. uye, pashure nerimwe Muruoko rwake anobata chirukiso pakati maviri nematanhatu mifananidzo dzomusango achaurawa pamusoro Gwenzi. pano, maviri okutanga vanoiswa kumusoro randomly asi chero dzokuwedzera vachange mberi pedyo acheter. wo, vatambi uwane 1 zvimwe zeya, kana nhamba mubayiro huwandu idukusa ari 10x zvachose bheji.
Random Remake / vokutsiva
Izvi akaparirwa nokusvika akafanana masumbu maviri pakati 5 uye 8 zviratidzo. ikozvino, vatambi nokuwana akasununguka respin pamwe masumbu inoitiswa panzvimbo. Ose mamwe akafanana zviratidzo kumhara ichapa imwe kuruka kusvikira pakupedzisira payout.
Izvi zvinogona kuitika pose maviri paradzira zviratidzo panyika Gwenzi uye mumwe 1 nyika chete kunze maonero. zvisinei, kuti chiratidzo rechitatu zvichabviswa nudged akakwidzwa maonero kuti Activate vakasununguka Muruoko rwake anobata chirukiso.
The Legend pamusoro Shangri-La:Sumbu Pays itsime-kuvakwa slots. Zvinosanganisira mitemo nyore uye inoshanda bhonasi mamiriro. This UK slots online game has a medium variance and thus, munhu anogona kuwana Unobata mikuru.